Yusuf Garaad: Castro iyo Mengistu
Subixii xigay waxaan u duulay Ethiopia. Waxaan ku sii heshiinnay in aan la ii sameyn soo dhoweyn weyn, maaddaama markaas ay weli ku jireen dagaal sokeeye.
Rasaas ayaa mar kasta dhacaysay. Mengistu wuxuu i geeyay meeshii ahaan jirtay qasriga Imberiyaaliyadda. Isla bartaas ayaa wadaxaajoodku ku billowday. Xogtii aan awalba haystay ayaa ii rumowday. Maalintii xigtay ayaan sii wadnay wadaxaajoodkeennii. Dabcan waxay ahayd in aan aad isu ilaalinno xagga amniga. Ethiopian-ku waxay keeneen Qayb dhan oo ciidan ah, aniguna Guuto ciidanka Cuba ah ayaan la imid. Maalinta aan nimid waxaa suuqa ku jiray war ah in uu afgembi dhacayo. Ma dhicin.
Siyaasadda dalka oo dhan ayaa is beddeshay. Waxayna taasi u suurta-gelisay in ay qaadaan tallaabooyin markaa ka hor ahaa wax aan dhici karin. Awal waxa keliya oo suurta-gal ahaa in si dadban loo taageero xoogagga Bidixda, hadda waxaan xoogaggaas u taageeri karnaa sida aan doonno.
Waxaan weydiiyay Mengistu in uu diyaar u yahay in uu Siyaad Barre kula kulmo Cadan. Waan isku af garannay.
Markii aan dhammaysannay wadahadalka waxaan u duulay Cadan.
Posted by Yusuf Garaad at 11:00:00